Daawo:Muuqaal kaa ilmaysiin doonaa+Caawi walaal gabadhaan yar ee caloosha biyuhu uga furan yihiin. - Africa News Addict
Daawo:Muuqaal kaa ilmaysiin doonaa+Caawi walaal gabadhaan yar ee caloosha biyuhu uga furan yihiin.
Eastern Africa 20-4-2017 raxanreeb.com 44
Faadumo Maxamud Maxammed Waa saddex sano jir ay dhaleen qoys danyar ah,waxayna in muddo ah la il-darrayd cudur ka hayaa dhanka caloosha oo marba marka kasii dambaysa ku sii fidaya,kaasoo ku dhacay,xilli ay da’deedu ahayd lix bilood.
Waalidka gabadhaan oo awalba danyar ahaa ayaa sheegay in ay u taag waayeen cudurka saqiirkaan haya,kadib markii ay dhaqaatiirta gudaha dalku u sheegeen in aanay waxba ka qaban karin.
Canab Faarax Jaamac iyo Maxamuud Maxammed Ciise oo ah waalidiinta gabadhaan yar dhalay waxay sheegeen in ay geeyeen xarumo caafimaad oo ku yaalla magaalooyinka...